Zvinoyangarara Ball Valve, Flanged Check Valve, Threaded Ball Valve - Yongyuan
Professional vharafu pakugadzira
Zhejiang Yongyuan Valve Co Ltd, State-vaiva zvebhizimisi kuti Zhejiang Yongkang vharafu fekitari kare, rakaumbwa muna 1967. With nhoroondo anenge 50 zvemakore zvenhoroondo, tiri mumwe pamusoro bhizimisi kuti mavharuvhu, varehwa ushumiri emarudzi michina indasitiri , uye mumwe kiyi emakambani ane vharafu kugadzira muna Zhejiang Province. kambani yedu akawana mukurumbira kunoshamisa mabhizimisi munyika Zhejiang Province, akaonawo inofambiswa kubva mutengi zvinogutsa uye mibayiro yakanaka mabhizimisi unongotaura. Mazuvano tiri mumwe nhengo yeDare China Valve Association, uye mumwe muunganidzwa emakambani pakati National Ball Valve Standard, akasarudzwa somumwe yakanakisisa Chinese makemikari michina bhizimisi.
Stainless simbi vharafu zvikumbiro uye Ma ...
Stainless simbi mavharuvhu nokuti upenyu hwayo refu, kwete ngura, girini uye zvimwe zvakanakira changamire yava vakapinda maindasitiri mafomu, razova munda Mapaipi indasitiri kuchaita kutenga vharuvhu zvigadzirwa, asi mudzimba vharuvhu vagadziri kuti zvinodiwa dzakawanda haisi Univ. ..
Good musika tarisiro mukuru-dzvinyiriro VA ...
On edu iyezvino vharafu pamusika, kunze neyamapani kufurirwa vharafu kuzadzisa pamwero zvinogamuchirika pamusika remarudzi, mukuru-kufurirwa mavharuvhu zvichiripo kuvimba kupinzwa. Under Inopfuurira zvakanaka macroeconomic mamiriro ezvinhu, vakawanda kugadzirwa rokutengesa huru vharafu indasitiri ane maintaine ...
Development zvinoitwa mudzimba dzamatunhu -...
Chikonzero low unhu vharuvhu zvigadzirwa ndechokuti, nokuda nokukurumidza kuwedzera pamusika, ari hwepakutanga-vaiva vharafu emakambani kunge akavhara pasi uye Kutamiswa. Kunyange zvazvo vakawanda Township emakambani zvave nokukurumidza, nokuda yakaderera pokutangira Township vachida ...